को बन्लान् ओलीको विकल्प ? – LIVE 92 Media
को बन्लान् ओलीको विकल्प ?
ओलीले विभिन्न सूत्रहरूमार्फत नेपाललाई पनि अहिले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनभन्दा आफूले सरकारका कमी–कमजोरी सच्याउने प्रस्ताव पठाएका छन्। उनले आगामी दिनमा पार्टीको विधानअनुसार आफू चल्ने र पार्टी निर्देशनअनुसार सरकार चलाउने भन्दै नेपाललाई समझदारीको प्रस्ताव पठाएका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मुख्य तीन कुरा छन्,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘पहिलो उहाँले सबै पक्षलाई समेट्ने गरी मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ, दोस्रो समान सहभागिता हुने गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र तेस्रो आफ्नो निजी सचिवालयका सदस्य परिवर्तनको प्रस्ताव छ।’ नेपालले आफू विदेश भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई दोहोरो प्रदेश इन्चार्जसमेत बनाएर दोहोरो जिम्मेवारी दिएको भन्दै पार्टी बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट राखेका थिए।
Previous Article प्रचण्ड, बाबुरामलगायत पूर्व माओवादीको ‘टाउकोमाथि तरबार’
Next Article ओलीको आक्रामक अस्त्रमा मध्यावधि देखि संकटकाल सम्म